Lenovodị Ntorobịa Lenovo Z6: Nkọwapụta, Ahịa na Mwepụta | Gam akporosis
The Lenovo Z6 Ntorobịa Edition e eze n'ihu
Edere Ferreno | | Lenovo, Mobiles
Couplebọchị ole na ole gara aga, anyị nwetara nkwụsị mbụ ma ugbu a ọ bụ ọkwa. E gosipụtara Lenovo Z6 Youth Edition na ọkwa. Na mmalite nke izu mbụ nkọwa e leaked nke ekwentị ọhụrụ a nke akara ndị China. Ugbu a, anyị maara ihe niile banyere ekwentị ọhụrụ a site n'aka ndị nrụpụta, nke emepụtara n'ime oke etiti ya.
E gosipụtara Lenovo Z6 Youth Edition a dị ka smartphone kachasị adọrọ mmasị na mpaghara ahịa a. Karịsịa n'ihi na ọ na-abịa ezigbo uru maka ego. Nhazi nke ugbu a, nwere ezigbo nkọwa na nnukwu batrị. Kedu ihe ọzọ anyị nwere ike ịtụ anya ya?
Ihe a haziri n’ekwentị anaghị ewe ọtụtụ ịtụnanya,, dịka anyị nwere ike ịhụ n'izu a. Akara ndị China na-etinye aka na ihuenyo nwere ọkwa n'ụdị mmiri mmiri, ihe kachasị ewu ewu na gam akporo taa. N'aka nke ọzọ, ha hapụrụ anyị ọtụtụ kamera azụ, ebe ebe akara mkpịsị aka ekwentị dịkwa.
Lenovo Z6 Pro: highdị ọhụrụ ọhụụ ọhụrụ
1 Nkọwapụta Lenovo Z6 Ntorobịa Edition
Nkọwapụta Lenovo Z6 Ntorobịa Edition
Nke a Lenovo Z6 Youth Edition bụ a ọma ekwentị na a adịchaghị ufọt ufọt nso na gam akporo. Ọ na-eji ihe nhazi ahụ arụ ọrụ nke ọma na mpaghara ahịa a, ọ nwere ezigbo njirimara, dịka nnukwu batrị. Na mgbakwunye, igwefoto ya bụ ike ọzọ nke ekwentị. Ndị a bụ nkọwa ya zuru ezu, nke anyị maraworị otu akụkụ:
Ihuenyo: 6,3 sentimita asatọ na mkpebi 2340 x 1080 pixel
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 710
Nchekwa ime: 64/128 GB (gbasaa na microSD ruo 256 GB)
Igwefoto n'ihu: 16 MP
Rear igwefoto: 16 + 8 + 5MP
Batrị: 4050 mAh na-ebu ọnụ ngwa ngwa 15W
Njikọ: Dual SIM, 4G, 802.11 a / b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, USB C, minijack, abụọ GPS
ndị ọzọ: Rear mkpisiaka agụ
Akụkụ: 156,6 x 74,3 x 7,99 mm
Ibu ibu: 164 grams
Offọdụ n'ime nkọwa ekwentị a amaala anyị. Batrị ga - abụrịrị otu n’ime ike ekwentị. Dị ahụ na-ahapụ anyị ikike batrị 4.500 mAh, nke ga-enye ezigbo nnwere onwe. Na mgbakwunye, ọ na-abịa n'ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa, nke doro anya na ọ bụ akụkụ nke mmasị ọtụtụ ndị na-azụ ahịa chọrọ ịzụta ekwentị ahụ. Anyị na-ahụkwa njikọ dị iche iche nke ekwentị gbasara RAM na nchekwa. Yabụ ịhọrọ otu ihe masịrị gị.
N'aka nke ọzọ, igwefoto bụ ihe ọzọ dị ike nke Lenovo Z6 Youth Edition a. Dịka anyị na-ahụ n'ọtụtụ ụdị dị n'etiti etiti na gam akporo, na-ahapụ anyị na igwefoto azụ atọ. Igwefoto ụfọdụ na-abata na-arụ ọrụ site na ọgụgụ isi, nke na-enye anyị usoro ndị ọzọ nke foto, na mgbakwunye na nchọpụta ọnọdụ mgbe niile. Yabụ na anyị nwere ike iji ekwentị n'eji foto dị mma oge niile. A na-eji otu ihe mmetụta maka ihu, na nke a 16 MP, dịka emesịrị gosipụta taa. Ọ na-abịa na ọgụgụ isi.
Ekwentị mkpanaaka: New Brand Lenovo
Nke a Lenovo Z6 Youth Edition ọ na-ama e eze n'ihu na China. N'oge anyị enweghị ozi ọ bụla gbasara mmalite ekwentị nke ekwentị. Ọ bụ otu n'ime isi obi abụọ banyere ihe nlereanya a. Ya mere, anyị ga-echere ụlọ ọrụ ahụ n'onwe ya inye anyị ozi ndị ọzọ na nke a. Anyị nwere olile anya na a ga-ebupụta ya na Europe, ọ bụ ezie na nkesa nke ekwentị ndị a ma ama abụghị nke kacha mma.
Anyị na-ahụ ọtụtụ nsụgharị nke Lenovo Z6 Youth Edition n’usoro nke RAM na nchekwa. Ọzọkwa, a ga-enwe agba abụọ nke ekwentị ahụ. On a nwa n'akụkụ, a kpochapụwo nzọ na nke abụọ na otu bụ uzuzu ohere. Ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-egbuke egbuke, dị ka anyị nwere ike ịhụ na foto. Ọnụ ekwentị:
Versiondị nke nwere 4/64 GB na-efu 1099 yuan, nke gbasara 142 euro iji gbanwee
6dị 64/1399 GB dị ọnụ na 181 yuan (gburugburu XNUMX euro na ọnụego mgbanwe)
Versiondị ekwentị ahụ nwere 6/128 GB na-abịa na ọnụahịa nke yuan 1699, nke bụ ihe dị ka euro 220 ịgbanwe
Kedu ihe ị chere gbasara ekwentị ọhụrụ a site na akara ndị China?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » The Lenovo Z6 Ntorobịa Edition e eze n'ihu
A tọhapụrụ Pokémon Rumble Rush maka gam akporo